Nzira yekusarudza sei yakakodzera kuvhundutsa (coilover) yemotokari yako?
Kufananidza hunyanzvi 1. Tarisa kuti chigadzirwa chinopa 2-3 inch kukwirira zvinodiwa. Zvimwe zvigadzirwa zvinongopa 2 inches kukwirira. Mushure mekusashandisa zvishoma masendimita matatu kukwirisa, zviri nyore kukwevera kusvika kumagumo mu-off-road uye kukonzera kukuvara. Chechipiri, ingave iyo dhayamita yepakati telescopic tsvimbo ye ...
Kushandisa Chigadzirwa Kuti ikurumidze kuderedzwa kwefuremu uye kudengenyeka kwemuviri kuti uvandudze kutsvedzerera (kunyaradza) kwemota, zvinobata zvekuvhundutsa zvinoiswa mukati meiyo suspension system mumotokari zhinji. Iyo yekuvhundutsa-inobata sisitimu yemota inogadzirwa ne sprin...
Iyo yekuvhundutsa inopinza yakagadzirwa naMax Auto, inosanganisira mhando yemafuta uye gasi rudzi, twintube uye mono chubhu, yakatengeswa zvakanyanya pasirese pasirese, inosanganisira USA, EUROPE, Africa, Mid-East, South Asia neSouth America. ...
Iyo yekuvhundutsa inopinza (Absorber) inoshandiswa kudzvanya kuvhunduka uye kukanganisa kubva munzira yemugwagwa kana chitubu chadzoka mushure mekutora kuvhunduka. Inoshandiswa zvakanyanya mumotokari kumhanyisa kudzoreredzwa kwekudengenyeka kwechimiro uye muviri kuvandudza d ...